काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ३ सय ४७ – Khabar Silo
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ सय ४७ पुगेको छ।
आइतबार उपत्यकामा ६ जना थपिएसँगै कुल संख्या ३ सय ४७ पुगेको हो। जसअनुसार काठमाडौंमा ५ जना र ललितपुर जिल्लामा १ जना थपिएका हुन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेका अनुसार उपत्यकामा संक्रमितमध्ये धेरैजसो बाहिरबाट आएकाहरु छन्।
कतै पनि यात्रा नगरेका पनि केही संक्रमित रहेको उनले बताए। उपत्यकाका विभिन्न १२ ठाउँबाट समुदायस्तरको नमुना संकलन गरिएको उनले बताए। संकलन भएको ३ हजार नमुनामध्ये ३ जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरामा ५ सयभन्दा बढी संक्रमित छन्।
त्यस्तै कत्ति पनि संक्रमित नभएका जिल्लाहरुमा धनकुटा, भोजपुर, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्ला छन्।
आइतबार देशभर थप ८२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यीसहित हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या १६ हजार ८ सय १ पुगेको छ।
धरान : धरान-१५ मा जग्गाको विषयमा सौतेनी आमा छोरा बिच हानाहान भएको छ। झगडामा एक जना घाइते भएका छन् भने एक जनालाई धरान प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ। धरान प्रहरीले रड र चक्कु लगायतका हातहतियार लिएर सामूहिक रूपमा घरमा कुटपिट भइरहेको सूचनाको आधारमा आज दिउँसो ४० वर्षीय तारा तामाङलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। जेठी तर्फका छोरा […]
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पोखरामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। ​ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार गरीरहेका एक जना कोरोना संक्रमितको शनिबार राति ११: ३५ बजे मृत्यु भएको हो । मृतक पोखरा–१९ लामाचौरका ६२ वर्षीय पुरुष रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले जनाएको छ । उनी डाइयबिटिजका बिरामी रहेका र गत […]
साँझ ढल्किँदै थियो। वरिपरिको बत्तीको उज्यालोले पोखरी चम्किरहेको थियो। बाँसुरीको मनमोहक धुनले सन्ध्याकालीन माहोललाई उत्सवका रूपमा परिणत गरिरहेको थियो। बत्तीको उज्यालोले चम्किएको पोखरीमा राति पनि दुईवटा डुंगा चलिरहेका थिए। पोखरीभित्र सीमित मानिस रहे पनि वरिपरि स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थिति थियो। मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ मा रहेको तीन सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक निगु पुखुः अर्थात् दुई पोखरीमध्ये दक्षिणतर्फको पोखरीमा […]